महामारीको यो बेला घरबाटै कसरी लिने स्वास्थ्य सेवा ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
महामारीको यो बेला घरबाटै कसरी लिने स्वास्थ्य सेवा ?
बैशाख १७, २०७८ शुक्रबार १२:४४:१७ | जानुका दुवाडी
बाँके घर भइ कीर्तिपुर बस्दै आएकी निरा थारु गर्भवती हुनुहुन्छ । गर्भ रहेको चौथो महिना चलिरहँदा चार पटक नै जाँच गरिसक्नुभयो । यसअघि एकपटक गर्भ खेर गएकाले फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर उहाँ बेलाबेला जाँच गराउन अस्पताल गइरहनुहुन्छ ।
तर अहिले सुरु भएको निषेधाज्ञाका कारण डाक्टरले अस्पताल नआउन आग्रह गरेपछि भने उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म अवस्था सामान्य नै भएको डाक्टरले बताए पनि अबको दिनमा जाँच गराउन नपाइने हो कि भन्ने पीरले उहाँलाई सताइरहेको छ ।
घर तथा आफन्तबाट टाढा रहेको र आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएकाले चिन्ता लाग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अस्पताल जाँदा कोरोनाको डर छ भने अस्पताल नजाँदा गर्भको अवस्था के छ भन्ने थाहा नहुने हुँदा उहाँजस्तै अरु महिलाहरु यतिखेर समस्यामा परेका छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीको पहिलो लहरमा गर्भवती र सुत्केरी धेरै प्रभावित भएका थिए । त्यही भएर अहिले कोरोना सर्छ कि भन्ने डर उत्तिक्कै लाग्छ निरालाई । कोरोनाको जोखिम भएकाले डाक्टरले नियमित जाँचका लागि अस्पताल आइरहनु पर्दैन भनेका छन् । सामान्य समस्या भएमा फोनमार्फत् सल्लाह लिन र केही जटिल समस्या भएमा मात्र अस्पताल जान भनेका छन् ।
धादिङकी गंगा घिमिरेको कान बेलाबेला दुखिरहन्छ । लामो समयदेखि कानको समस्या भोगीरहेकी उहाँलाई डाक्टरले अप्रेशन गर्न सल्लाह दिएका छन् । पछिल्लो समय कानको समस्या बढ्दै गए पनि कोरोना सङ्क्रमणको डरले अस्पताल नगएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अस्पताल जाने भन्दाभन्दै निषेधाज्ञा सुरु भयो । कानको समस्या बढ्दै गए पनि डाक्टरसँग घरबाटै सल्लाह लिने गरेको र डाक्टरको सल्लाहअनुसार औषधि लिइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
निरा र गंगा जस्तै धेरैले यतिबेला अस्पताल जानुभन्दा सकेसम्म घरमै उपचार गर्ने विकल्प रोजिरहेका छन् । कम जटिल प्रकृतिका दीर्घरोगी र घरबाट उपचार गर्न सकिने खालका बिरामीले घरमै बसेर स्वास्थ्य समस्याको समाधान गरिरहेका छन् ।
गएको वर्ष पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण उपचार सेवा प्रभावित हुँदा धेरै जना समस्यामा परेका थिए । उपचारको अभावमा कतिपयको ज्यानसमेत गएको थियो । तर केही व्यक्तिहरु कोरोना भाइरसलाई सामान्य मानेर सानातिना स्वास्थ्य समस्या हुँदासमेत अस्पताल गएका थिए । जसले गर्दा कोरोना भाइरस फैलनमा मलजल पुगेको थियो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि यो वर्ष पनि सरकारले ओपीडी सेवा तत्काललाई बन्द गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ । डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमितको उपचारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएपछि सरकारले ओपीडी सेवा तत्काललाई बन्द गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
अरु आकस्मिक सेवा भने यथावत् सञ्चालन गर्न भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई सघन उपचार तथा आकस्मिक उपचारसम्बन्धी आवश्यक उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि भनेको छ ।
सरकारले यस्तो निर्देशन दिए पनि काठमाण्डौका ठूला सरकारी अस्पतालहरु वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगायतका अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द गरिएको छैन । सरकारले भने सानातिना स्वास्थ्य समस्या हुँदैमा अस्पताल नजान आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारी महामारीको अहिलेको समयमा सानोतिनो समस्या लिएर अस्पताल नजान आग्रह गर्नुहुन्छ ।
‘अरु समस्या भएर अस्पताल गएको बेला कोरोना सङ्क्रमण भएमा झन् धेरै असर गर्छ । अस्पतालमा सबै खालका बिरामी जम्मा हुने भएकाले त्यो झनै संवेदनशील ठाउँ हो । सानातिना समस्याका लागि घरबाटै जानकारी लिन सकिन्छ’ डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो । अस्पताल गइरहँदा अरु रोग सर्ने जोखिम पनि उत्तिक्कै हुने गर्छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल पनि कोरोनाको जोखिम बढेका बेला सानातिना स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल नजान सुझाव दिनुहुन्छ । 'अस्पताल जानै पाइँदैन भनेको होइन । तर सानातिना समस्या हुँदैमा अस्पताल गएर भीडभाड नबढाउँ मात्र भन्न खोजेको हो ’ उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तिम अपडेट: जेठ १९, २०७८